Fumanisa into esinokuyibona kwisixeko saseScotland iGlasgow | IBezzia
Yintoni ongayibona eGlasgow
Susana Garcia | 21/04/2021 10:00 | yokuPhila, Uhambo
La Isixeko saseGlasgow sisixeko esikwizibuko esikufuphi noMlambo iClyde. Esi sixeko saseScotland ese-Lowlands asiqhelekanga indawo yokutyelela xa kuthelekiswa ne-Edinburgh, kodwa ikwafihla izinto ezithile ezinomdla. Ukusuka kwinkulungwane ye-XNUMX ukuya kweye-XNUMX yayisisixeko esasichume kakhulu kwaye sinemizi-mveliso, ke ngoko yayinokukhula okukhulu. Namhlanje sisenokubona ubugcisa baseVictorian naseGeorgia, kunye neendawo zangoku.
Masibone ukuba ziintoni amanqaku anomdla kwisixeko saseGlasgow, nolutyelelo olunomdla. Lutyelelo olukhulu ukuba sise-Edinburgh, kuba sifika ngaphambi kweyure. Siza kuba nakho ukubona iziko layo eliyimbali kunye nendawo ehlaziyiweyo yezibuko ecaleni komlambo, ukongeza kwezinye izinto.
1 Icawa yaseSt Mungo
2 IMyuziyam yaseKelvingrove
3 IGlasgow Botanic Garden
4 INecropolis eGlasgow
5 IAshton kunye noMgaqo ofihliweyo
6 Umbindi wesixeko saseGlasgow
Icawa yaseSt Mungo
Lo ICathhedral sesinye sezakhiwo zayo ezindala kunye nokubonakaliswa okuyinyani kwesimbo seGothic eScotland. Yicawa enkulu eyayakhiwe ngenkulungwane ye-XNUMX kwaye yahlaziywa ngenkulungwane ye-XNUMX. Ungandwendwela ingcwaba likaSanta Mungo, ingcwele yasesixekweni kwaye ikwi-crypt endala ukusuka kwinkulungwane ye-XNUMX. Unokuyixabisa iifestile ezintle zeglasi, nangona zangoku, kunye nophahla lwenkulungwane ye-XNUMX. Icawe entle kakhulu kwaye yenye yotyelelo olubalulekileyo kwisixeko saseGlasgow.
Kule dolophu kukho iimyuziyam ezininzi, nangona le yeyona nto kufuneka uyibone kwaye ungaphoswa ukuba awunalo ixesha elininzi lokuzibona zonke. Le myuziyam ijikelezwe ziigadi ezintle kwaye ayitsali nje kuphela iindawo ezingqongileyo, njengoko inemisebenzi emininzi enomdla. Siyabona kumagumbi abo UBoticelli 'u-Annunciation' okanye uDalí kaKristu ka-Saint John woMnqamlezo ', Kunye nemizobo eyenziwe nguVan Gogh okanye uRembrandt.
IGlasgow Botanic Garden
Intle le Igadi yezityalo isekupheleni kwe-West End. Yipaki enkulu kawonke-wonke entle kakhulu kumaxesha onyaka anjengentwasahlobo nasekwindla. Kule gadi sifumana ibhotwe laseKibble, igreenhouse enkulu yaseVictoria efanele ukutyelelwa. Indawo efanelekileyo yokuthatha iifoto ezintle.
Ecaleni kweCathedral yaseSt Mungo yindawo entle yeGlasgow necropolis. E-Edinburgh unokuxabisa amangcwaba amadala amahle, anomtsalane okhethekileyo. La mangcwaba avela kwixesha lama-Victorian, ke ineenkcukacha ezininzi eziza kusishiya simangalisiwe. Ungathatha uhambo lokuncoma zonke iinkcukacha emangcwabeni kwaye unyuke uye kwindlu yecawa yecawa ukuze uyibone isentla.
IAshton kunye noMgaqo ofihliweyo
Ukuba uva nantoni na malunga nemizila, imxinwa, indala kunye neendlela ezinamabala apho unokufumana khona eyona ndawo intle esixekweni. Olunye utyelelo ke olo Ngokuqinisekileyo uya kufuna ukuyenza ibandakanya iAshton kunye nendlela efihliweyo. I-Ashton ikwisithili seyunivesithi kwaye sinokufumana imivalo kunye neeresityu ezinomoya omnandi apho ungamisa khona. Efihliweyo kuzolile, kukho iikofu kunye nezinye iivenkile zokuthenga into enomdla.
Umbindi wesixeko saseGlasgow
Embindini wedolophu sinokubona iindawo ezinomdla, kuba sisixeko apho sifumana khona ubugcisa kunye neefadade ezintle. IGeorge Square sisikwere esiphakathi kakhulu nesikhumbuzo semfazwe. Kwisitrato iBuchanan sifumana ezona zitalato zorhwebo ukusuka esixekweni, kunye neendlela ezithile ezinomdla okanye imizila kunye nemiboniso yobugcisa beedolophu Sinokundwendwela neNdlu yokuKhanya, isakhiwo esinqabileyo eMackintosh esasiyikomkhulu lephephandaba kodwa ngoku siyimyuziyam enokwamkelwa simahla.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » yokuPhila » Yintoni ongayibona eGlasgow
Iifoto zomtshato, uhlala uhlala ulungile njani?
Yintoni i-fenugreek kwaye isetyenziselwa ntoni?